‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा जान छुटेकी रचनाको सबैलाई चकित पार्ने आवाज, आवाज भनेको यस्तो हुनुपर्छ ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 26, 2021 AdminLeaveaComment on ‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा जान छुटेकी रचनाको सबैलाई चकित पार्ने आवाज, आवाज भनेको यस्तो हुनुपर्छ ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
पाल्पाकी निकै प्रतिभाशाली नव गायिका हुन्, रचना राना मगर । निकै नै सुमधुर स्वरकी धनी रचना यतिबेला काठमाडौंमा पढ्दैछिन् । शिशिर भण्डारीको नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा कुराकानी गर्दै रचनाले आफुलाई नेपालको ठुलो गायिका बन्ने लक्ष्य रहेको बताईन् ।
साच्चै रचनाको आवाज निकै मिठो छ, उनलाई सयौं राम कमेन्टहरु प्राप्त भएका छन् । रचना रिमालको निकै नै ठुलो फ्यान रहेकी रचनाको आमा बुवा गाउँको एक स्कुलमा क्यान्टिनमा काम गर्दछन् । सानैदेखि आफ्नो आमा बुवाको दुख देखेकी रचनाले ठुलो गायिका बनेर आफ्नो आमा बुवाको लागि एउटा सानो घर बनाउने सपना देखेकी छिन् ।
रचनाकै फोटो फिरिममा गीत सुनाउँदै रचनाले आफुले पाल्पामा भएको जिल्ला स्तरिय गायन प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेको पनि बताईन् । तपाई भ्वाईस फ नेपालमा किन जानु भएन भन्ने शशिशिरको प्रश्नमा रचनाले आफु यसपाली चुकेको बताईन् । साँच्चै यदि यो आवाज भ्वाइृस अफ नेपालमा गएको भए, चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल हुन्थ्यो त ? भिडियो हेर्नुस: